दशैँ कहाँ दशैँ जस्तो छ र ? – Interview Nepal
दशैँ कहाँ दशैँ जस्तो छ र ?
October 22, 2020 October 22, 2020 by Interview Nepal
दसैं आउनु एक महिना अगाडि नै घर पोत्ने र लिप्नेकुरा चल्थो र पो दसैं दसैं जस्तो हुन्थो । महिनौ दिन अगाडि राती माटो लिन साथी भाइ जम्मा भएर ३र४ घन्टा हिडेर उकालो उरालो गर्दै बोरामा रातोमाटो बोकेर घरमा लेराईन्थो र पो दसैं दसै जस्तो हुन्थो । बिदेश गएका साईला काकाले ठूलो टिभी लेराएर गाउँ भरीका मान्छे राखेर टिभी खोल्थे र पो दसैं दसै जस्तो हुन्थो ।
रेडियोमा मुग्लान फिल्मको गीत दसैं आयो भन्ने बज्थो र पो दसैं आएको जस्तो हुन्थो । स्कुल जाने कपडा दसैंमा हालिन्थो र पो दसै आएको जस्तो हुन्थो । पिङ हाल्नको लागि सबै जना बाबियो काट्न बनपाखा धाउथेउ र पो दसैं आएको जस्तो हुन्थो । दसैंको लागि हाल्दिएको स्कुलको पाईन्टमा चिउरा हालेर पिङ खेल्न साथिभाईहरु गहिन्थो र पो दसै आएको जस्तो हुन्थो ।
आमा बा सग नाच्दै रमाउदै बाटोमा यो किन्दिनु त्यो किन्दिनु भन्दै आफन्त इष्टमित्रकोमा गहिन्थो र पो दसैं आएको जस्तो हुन्थो । चाडपर्व पनि उमेर बढे सग घटेको महसुस हुदो रैछ जिम्मेवारी बढदै गएसी हरेक चार्डहरुमा पहिलाको जस्तो रमाइलो नहुदो रैछ,दसैं आउदा दसा जस्तो लाग्दो रैछ । चाडपर्व आउनु भनेको बिहे नभएकाहरुलाई बिहे कहिले गर्छ्स अब त बेला भयो यो साल त आट्नु पर्छ भन्ने प्रश्न आउनु हो । जता जाउ बिहेकै कुरा कमाएकै कुरा,घुमेकै कुरा के गरिरहेको छ्स यस्तै कुरा मान्छेहरुलाई अरुको बारे जान्न कति हतार हुन्छ है ? अरुको खोजिनिती गर्न कति ब्यस्त हुन्छ्न है । खै दसैं किन अचेल दसै जस्तो छैन मलाई मात्र यस्तो हुन्छ कि अरुलाई नि यस्तै हुदो हो । दसैं त आमाको काखैमा रमाइलो खै किन हो गाउँको भिर पाखैमा रमाईलो ।
सबैमा विजया दशमी २०७७ सालको हार्दिक् मंगलमय शुभकामना
कोरोना भाइरसबाट आफु पनि बचौ र अरुलाई पनि बचाउ
Posted in मनोरञ्जन, विचार, समाज, साहित्य/कला